डाक्टर साथी_नेपाल मेडिकल भोलिन्टियर सोसाइटी : 13.तालु खुइलिनु (Alopecia- Hair Loss)
बिभिन्न समयमा बिभिन्न पत्र-पत्रीकाहरुमा छापिएका तालु खुईलिने र यसको उपचार भन्दै फोटासहित प्रकाशित भएका बिज्ञापनहरु हामिले प्रशस्तै देखेक छौ। पहिले तालु पुरै या आशिक खुईलेको फोटो र अहिले पुरै कपाल भएको फोटो राखि तुलना गरिएका आकर्षक बिज्ञापनहरु भेटिन्छन् । यस्ता धेरै बिज्ञापन दाताहरुको परिचय समेत स्पष्ट नहुनु नौलो हैन। यस्ता बिज्ञापनमा कति सत्यता छन अनि कति ठगि ? राम शर्मा २२ बर्षमै यस्तो समस्याको शिकार भैसकेका छन । आज हामी यसै बिषयमा केही छलफल गर्दैछौ ।
कपाल रौं परिचय
मुख्यरुपमा रौ लाई ३ प्रकारमा बिभाजन गर्न सकिन्छ । १. लानुगो रौं– बच्चा पाठेघरमा हुँदा हुने पातला तथा नरम
रौंहरु हुन्, जुन पाठेघरमै खस्दछन । २. भेलस रौं–शरीरको प्रायस सबै भागमा हुने नरम तथा छोटा रौंहरु हुन । ३. टर्मिनल रौं–मुख्यरुपमा टाउको, काखी तथा जनेन्द्रीय बरिपरि हुने कडा लामा रौंहरु हुन ।
रौं बढ्ने चक्र
हाम्रो टाउकोमा करिब एक लाख जति रौंहरु हुन्छन् र एक सय जति दैनिक झर्दछन् । एउटा रौंको आयु करिब एक हजार दिन हुन्छ, त्यसपछि यो खस्न थाल्दछ । यो सामान्य प्रक्रिया हो । यो भन्दा बढी रौं झुर्न समस्या हो ।
तालु खुइलिनु प्रकारहरु
१) सिकाट्राइसियल - जन्मजात समस्या, सुन्निएको अवस्था, कोठी, चोटपटक, क्यान्सर
२) नन–सिकाट्राइसियल -
A) सानो भाग-एलोपेसिया एरेटा(खोइरे रोग), अनुवांशिक (एन्ड्रोजेनिक), ट्राइकोटिलोम्यानिया (मानसिक रोग), ढुसी संक्रमण (टिनिया)
B)पुरा भाग – एलोपेसिया युनिभरसालिस
नोटः १) सिकाट्राइसियलमा रौंका जराहरु नष्ट हुन्छन् ,जसको कारण कपाल पलाउन सक्दैन , तालु चिल्लो देखिन्छ ।२) नन सिकाट्राइसियलमा रौंका जराहरु हुनाले पुनः पलाउन सक्छ ।
कारण तथा उपचार
१) एलोपेसिया एरेटा थाइरोइडका रोगहरु, दुवी तथा मानसिक तनावको कारणसँग सम्बन्धित छन् । विस्तारै खाली भएको ठाउँमा कपाल उम्रन थाल्दछ । स्टेरोइड, सोरालिन आदि उपचारमा प्रयोग गरिन्छ । नक्कली कपाल भएको टोपी विग यदि पुरै कपाल झरेमा प्रभावकारी देखिन्छ ।
२) एन्ड्रोजिेनिक एलोपेसीया जसलाई पुरुष प्रकारको खुइले भनिन्छ जुन वंशानुगतरुपमा आएको पाइन्छ । तथापि यो बुझ्न पर्छ कि पुरुष हर्मोन बढी हुनेमा यो देखिएको छ । पुरुषमा कुनै परीक्षण आवश्यक नभए पनि महिलामा भने पुरुष हर्मोन निकाल्ने ट्युमर छ कि छैन भनी परीक्षण गर्नुपर्दछ । पुरुषको हकमा, मिनोजिडिल (२–५ प्रतिशत) नामक औषधिको प्रयोगले कपाल झर्ने प्रक्रिया ढिलो गराउने तथा नयाँ कपाल पलाएको पनि पाइएको छ तर यो दीर्घकालीन भने देखिएको छैन किनकि औषधि बन्द गर्ने वितिकै फेरि कपाल झर्न थाल्छ त्यसैले प्रयोगकर्ताले जीवनभर प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । फिनासटराइड नामक औषधिको पनि प्रयोग देखिन्छ । विग लगाउनु तथा सर्जरी अरु विकल्प हुनसक्छन् ।
३) टेलोजेन इफ्लुभीयम नामक तालु खुईले समस्या मुख्यतम संक्रमण (टाइफाइट, औलों, डेन्गु) तालुका अपरेशन, चोटपटक, परीक्षाको तनाव, तनावयुक्त बैवाहिक सम्बन्ध, प्रशव पीडा आदिमा देखिएका छन् । समस्याको निराकरण पहिलो उपचार हो । २-३ महिनापछि कपाल झर्न बन्द हुन्छ तर पनि पहिलेकै अवस्थामा आउँदैन् ।
४) ट्याक्सन एलोपेसिया नामक कपाल झर्ने समस्या आजभोलि ह्वातै बढेको पाइएको छ । कपाल सिधा पार्न गरिने प्रविधि हट कम्बिङ यसको मुख्य दोषी हो । कपाल कोर्ने स्टाइल परिवर्तन नै उपचार हो ।
५) ट्राइकोटिलोम्यानिया नामक कपाल झर्ने समस्या युवा अवस्थाका केटीहरुमा पाइएको छ । दुखाई कम गर्न कपाल उखाल्ने यो एक मानसिक समस्या हो । विरामीलाई मानसिक सहयोग आवश्यक देखिन्छ ।
६) छालाका संक्रमण जस्तो रौंका जराहरुको संक्रमण, ढुसीको संक्रमण, सोरियासिस तथा कुष्ठरोगमा पनि यो देखिएको छ । कारणहरुको उपचार पश्चात स्वत कपाल पलाएको पाइन्छ ।
७) कुनै औषधि जस्तो केमोथेरापी, विष सेवन पश्चात पनि यो समस्या देखिन्छ । कारणहरुको उपचार पश्चात स्वत कपाल पलाएको पाइन्छ ।
८) बच्चाहरुमा कुपोषणको कारण पनि कपाल झरेको पाइएको छ ।
१) कपाल झर्ने समस्या कुन प्रकारको हो सर्वप्रथम बुझ्नको लागि चिकित्सककोमा जानुहोस् ।
२) चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम औषधि उपचार तर्फ लाग्नुहोस्
३) तपाईको निराशा उपचारपछि आशामा परिणत नहोला भन्न पनि सकिन्न ।
४) तपाईको सुन्दरताको लागि तपाई हामी सबै मिलेर लाग्ने बेला भएन र !